Ségou Villages Connection · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Ségou Villages Connection
Vohitr'i Ségou: Isan'ireo Mpifaninana Amin'ny Dingana Famaranana Amin'ny BOB I Boukary Konaté
Misy galona hafa indray ny satrok'ilay mpikambana ao amin'ny tetikasan'ny Rising Voices sady mpandika tenin'ny Global Voices amin'ny teny Frantsay Boukary Konaté amin'ity taona ity. Tafiditra ao anaty lisitr'ireo hiatrika famanranana amin'ny Bilaogy Tsara indrindra (BOB) i Boukary, hetsika isan-taona karakarain'ny Vondrona Media Deutsche Welle hanomezana maripankasitrahana ho an'ireo bilaogy...
Mandray lalana mahaliana ny tetikasa Ségou Villages Connection any Mali, iarahana aminà tetikasan'ny UNESCO ho fitandroana ny lova [fr]. Boukary Konaté, mpandray anjara iray nahazo fanohanana avy amin'ny Rising Voices 2011, amin'izao fotoana izao dia miampita ny Reniranon'i Niger anatinà lakana Maliana nentin-drazana, mifindrafindra vohitra iray hafa isanandro mba hampianatra...
Ny ohabolana dia andian-teny fohy avy amin'ny fahendrena eo amin'ny fiarahamonina. Any Mali, maro amin'ireny fomba fiteny ireny no hita amin'ny teny Bambara, izay teny mbe mapahazo indrindra ao amin'ny firenena, indrindra fa any amin'ny faritr'i Ségou. Eto no idiran'ny tetikasan'ny Rising Voices , Ségou Villages Connection mampianatra ny mponina...
Mediam-bahoaka30 Avrily 2012
Mediam-bahoaka27 Janoary 2012
Mediam-bahoaka31 Oktobra 2011
Tantara mikasika ny Ségou Villages Connection
Bilaogera Asongadina: Oumar Dembélé
Antsafa 05 Septambra 2011
Fihaonana tamin'i Oumar Dembélé, mpampianatra iray amin'ny fanabeazana fototra ao Cinzana-Gare, tanàna iray amin'ny Faritr'i Ségou.Oumar koa dia mpikambana amin'ny tetikasa Ségou Villages Connection Fifandraisan'ny Tananan'i Ségou, tohanan'ny Rising Voices. Amin'ity tafatafa ity, Oumar dia mizara ny mahakasika ny teknolojia ao Ségou, ny filàna hanatsara ny zava-misy, ary ny hetaheta lehibe ho amin'ny ho avy.
Dika 04 Septambra 2011
Nandritra ny volana Aogositra dia nisedra tsy fahampianà rotsak'orana ireo vohitr'i Ségou, faritra iray ao Mali. Nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny asan-dry zareo eny an-tsaha izany, nanozongozona ny taom-pambolena iray manontolo. Ny hany sisa natao dia ny nivavaka. Farany, rehefa ela niandrasana dia tonga ny orana, nahafahan'ireo mponina mba nankalàza ny fifarànan'ny Ramadany tao anatin'ny saina tony. Ny mpandray anjara amin'ny tetikasa Ségou Villages Connection dia manoratra mikasika io vanim-potoana sarotra io.